HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo kula biirtay Manchester United, Manchester City tartanka Victor Osimhen
October 24, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay si dhow isha ugu heyso horumarka Victor Osimhen , iyadoo kooxda reer Spain ay miisaameyso u dhaqaaqista weeraryahanka aadka loo doonayo ee Napoli .
22-sano jirkaan ayaa qaab ciyaareed heer sare ah ku soo bandhigay kooxdiisa Talyaaniga bilowgii xilli ciyaareedka 2021-22, isagoo shabaqa soo taabtay sagaal jeer 10 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in Manchester United iyo Manchester City ay labaduba xiiseynayaan inay xiddiga heerka caalami ee dalka Nigeria keenaan Premier League xagaaga soo aadan.
Sida laga soo xigtay AS , Real Madrid ayaa sidoo kale ugaarsi ku jirta, iyadoo kooxda Carlo Ancelotti ay u aragto weeraryahanka inuu yahay bedelka ugu macquulsan ee Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe .
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegeysa in Bayern Munich ay 100m (£ 84.6m) ku dooneyso Osimhen, iyadoo kooxda reer Bundesliga ay isku diyaarineyso nolosha Robert Lewandowski ka dib .
Nigerian, oo ay weli afar sano uga harsan tahay qandaraaska uu kula jiro Napoli, ayaa dhaliyay 19 gool, waxaana loo diiwaan geliyay afar caawin 40 kulan oo uu u saftay kooxdiisa haatan tartamada oo dhan.